Best Hiking Start Points In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Best Hiking Start Points In Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Travel Europe
Kushevedza ese ejunkies uye vanotsvaga! Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi akanyanya makwikwi ekutanga mapoinzi uye maitiro ekuenda ikoko nechitima? Zvadaro uri panzvimbo chaiyo!
BEST Hiking START PFUNGWA: SHANU TERRE Coastal Trail - ITALY
Nokufamba pakati Cinque Terre nderimwe chakanakisisa zvinhu zvokuita Italy, uye mumwe Best musango kutanga pfungwa. Its musango mudungwe munzira ndezvimwe zvezvisarudzo dzakanaka Europe uye kana uri panze anoda kana chete munhu anoda vamwe pachiitwa pakati dzakaora Italian zvokudya, ndiyo imwe yenzira dzinopa mubayiro dzekunakidzwa neItari nzvimbo inoshamisa yegungwa.
Asi kana iwe hike kuti Cinque Terre unofanira kuuya takagadzirira. Kubva kunzwisisa muhwezva zvinetso kurongedza zvinhu zvakarurama uye nokuenda zvakarurama nguva gore, kuva zvakanaka achiziva achaita musiyano kwidza kuchinja upenyu-uye wearying slog.
How kuti ikoko nechitima:
• Kamwe kuItaly, tichibatsirwa Save A Train, chitima ichiri nzira yakanakisisa asvike Cinque Terre. Pane munharaunda chitima, ari Cinque Terre Express chitima, iyo unotevedza mhenderekedzo pakati nhepfenyuro Centrale pamusoro La Spezia uye Levanto. It Anodzivisawo zvachose maguta mashanu (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), uye imi muchava vanofanira kutora kufamba pakati pavo kamwe uri munzvimbo (kana iwe vasarudze kuti aende pamusoro inogarotaurwa kudenha mudungwe munzira). Sezvo kwezhizha 2016, mari Cinque Terre Express ndiye € 4 pa rwendo. Munguva kure-mwaka, yemanyorero kubva November kusvika March, kuti mutengo anodonhedza kuti € 1,80. chitima Izvi hazvirevi kupa reserved zvigaro.
• Pavakasvika kubva Florence kana Rome: Kune vashoma zvakananga nezvitima pazuva Firenze Santa Maria Novella yemapurisa La Spezia Centrale; vamwe zvinoda kuti kuchinja nezvitima muna Pisa. Mitengo inotanga pa € ​​13.50. At La Spezia, kuchinja Cinque Terre Express.
Florence kuna Levanto Zvitima
Florence kuna La Spezia Zvitima
Rome kuna La Spezia Zvitima
Rome kuna Levanto Zvitima
BEST Hiking START PFUNGWA: Makondo FAMBA - AUSTRIA
The Eagle Walk rinoumbwa 23 yakabatana nzendo, vanotevera mweya-kutora nzira kuburikidza Tirol. The Best musango kutanga pfungwa mudunhu, zvikamu zvizhinji hunogona kungoparara kuvhurwa muchishandisa waya motokari uye rakapedzwa wenguva- kana hafu-zuva kushanya. Tinoda nezveupenyu kuti chikamu chedu kufarira kuti Blog ino.
Ungave uri kuronga zuva kwidza kana multi-vhiki uchinzvera ari makomo, uchawana Eagle Walk kuva mukuru panze ruzivo. Rinopa mikana risingaenzaniswi kuongorora, ruzivo, uye anobatana hunhu.
Our Top Pick: Lake Zireiner See
Kufamba kwehafu yezuva kune vanoenda nguva nenguva. Kubva Kramsach muna Lower Inn Valley, kutora chigaro vachasimudza kuna Sonnwendjoch imba. A pfupi vanofamba kunotungamirira kune rine runyararo Zireiner nyanza, iro riri mumupata anenge 1,800-metres pamusoro pegungwa - nzvimbo huru kutonhore. inopisa chirimo mwedzi. The kufamba unoramba Zireiner Alm mafuro (1,698M) asati adzokera pamusoro cheya chikwidzo, kubvumira kuti atasve shure kuburuka Inn Valley.
Zviri nyore famba kubva kuUK kuenda Austria nechitima. Unogona kuenda kubva London kuna Vienna, Salzburg kana Innsbruck mune rimwe zuva na soro-nokukurumidza chitima. Kana kutora zvemasikati Eurostar kubva London kuenda kweBrussels, a Thalys yakakwirira-kumhanya chitima kuti Cologne, uye vakaisvonaka Nightjet akarara chitima kuna Innsbruck, Linz, kana Vienna husiku. Achangosvika ikoko, kusvika Tirol zviri nyore yayo nzwisisika richikurukura paruzhinji senga. Zviri nyore kuenda vakapoteredza nharaunda kushandisa nezvitima. Vanofamba achida kuita chikamu kana zvose yeGondo Walk kuwana pakutanga uye pakupedzisira pfungwa nechimwe pechikuva kushandisa omunharaunda mabhazi.
KweBrussels kuna Cologne Zvitima
KuCologne Vienna Zvitima
BEST Hiking START PFUNGWA: CAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
The Camino anozivikanwa mu Chirungu sezvo Munzira St James. Yese nzira dzeCamino mafambiro dzinotungamira dzinoenda kuSantiago de Compostela sekuno ndiko kusara kweSt James, (Santiago), dzakafukurwa muzana remakore rechipfumbamwe. Iyo yekufambisa yaifarirwa mune gumi, 11fung, uye zana ramakore rechi 12 uye ipapo zvishoma nezvishoma zvakaderera mukuzivikanwa.
Pakazosvika zana remakore rechi20, anenge hapana akanga achifamba chero nzira. Zvino mukupera kwa1970 uye nekutanga kwa1980 nzira yakava yekufarira vashoma. Vakatanga kunyora uye Map kuti nzira zvakare.
Muzana remakore rechi21, pfungwa imwe outorwa zvichida sokunofadza. zvisinei, iko kuedza kwekufamba kwemwedzi uye kubviswa kubva pamidziyo yazvino kuri kusunungura zvakanyanya.
Sarria ndiye guta Zvinosarudzwa Mapilgrim sezvo pfungwa mavakanga kutanga kuita Camino of Santiago. Vanopfuura 300,000 Mapilgrim vaifamba Santiago de Compostela mu 2017, zvimwe 60% akanga asarudza kutevera Camino Frances. Uye kupfuura 80,000 vavo akasarudza Sarria dzavo pokutangira. Chikonzero chikuru chekusarudza Sarria ndechekuti inopa diki nzvimbo inodiwa kuti vafambi vapiwe iyo Compostela (ari yomupilgrim chitupa). Daro kuna Santiago kunogona akafukidzwa mumatanho chete mashanu uye Anozvirumbidza vazhinji pokugara mikana uye basa vechinamato. Sarria zviri nyore kusvika musi mabhazi kubva dzakasiyana-siyana Spain.
How kusvika Sarria nechitima:
The chitima chimwe chezvinhu garika nzira kana uri parwendo kubva Madrid kuna Sarria. Pane zvakananga kubatanidza kuti vasare Madrid kwakaita Chamartin chiteshi kaviri pazuva, aine rwendo maawa anenge matanhatu. Uyezve, pane nezvitima siyana kuti anobatana Madrid pamwe Santiago de Compostela uye Lugo, maguta Galician izvo zviri nyore chaizvo kusvika Sarria, pamwe kwokubatana yakananga vanoverengeka ose zuva. Unogona kubvunza nguva dzose uye frequencies neZvapupu Renfe, National chitima kambani Spain raMwari.
The chitima zvakare akanakisisa nezvechisarudzo paaifamba kubva Barcelona. Kune zuva zvakananga Links kubva Barcelona (kana iwe unogona kuchinja pana Monforte of Lemos), pamwe nezvitima mezuva (kana iwe nokubatanidza AVE kana mukuru-nokukurumidza chitima pamwe Long Distance mikana) uye husiku nezvitima. The paavhareji rwendo nguva kubva Barcelona ndiye 12 maawa. The chitima kubva Barcelona kuna Sarria uyewo richibatanidza nevamwe maguta makuru kusanganisira Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, burgos, Palencia, uye Leon.
From Santiago de Compostela, Renfe anopa nezvitima maviri zuva kuna Sarria: mumwe ari 5 pm (maawa maviri 'rwendo nguva); uye panguva 6.07 pm (aine rwendo maawa anenge mana).
From Lugo, ari chitima iri zvakare sarudzo yakasununguka kwazvo. Renfe anopa zvakawanda kwokubatana nezuva kuti achawana kuti Sarria kubva Lugo mu 30 maminitsi.
BEST Hiking START PFUNGWA: WESTWEG Trail - JERIMANI
Zvinogona kutaurwa kuti Westweg muhwezva ndiwo mavambo zvose German kure musango mudungwe munzira. Rakava wokutanga akasarudzwa nzira rwaro shure 1900. kubvira ipapo, dzakarasika rakura kufukidza chinhambwe 177 zvemakiromita (285 makiromita) - kutanga muPforzheim kuchamhembe uye kupera muBasel kumaodzanyemba.
Kusiyana Mittelweg uye Ostweg, ari Westweg anotora iwe kunyanya kuburikidza kumadokero wamakomo. Uye sezvo iwe enda, iwe uchava chapupu kwomuzvarirwo kusiyana makurusa German pasi seri. Rizere omusipiresi uye spruce Masango. Zvanzi anopa gomo siyana zita rayo, ari treeless expanses iri kuchamhembe Black Forest. Akanyarara gomo madhamu, Panoramic dombo crests, glacial mumipata, uye makomo.
Pakati, uchaita vanokwira panhongonya dzawo zvakare uye zvakare. Iwe hike pamusoro ebani of Hornisgrinde uye kushanyira Belchen uye Hochblauen. Nakidzwa nemaonero pamusoro Schliffkopf uye famba yakakwirira gura akapoteredza Hohloh. A wechokwadi mukuru pfungwa kwidza yako, ehe saizvozvo, uchava wegomo Feldberg. The soro gomo iri Black Forest.
How kusvika Westweg nechitima:
Mazhinji makwande ekufamba-famba anogona kupatsanurwa kuita matunhu anokwanisa. Nokuti misha yakawanda achitevedza musango mudungwe munzira unogona Wakasvika zvakanaka nechitima. rubatsiro zvikuru kuronga kwidza ndiro mepu pachena pamusoro Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Inotaridza zvese zvechitima uye zvebhazi nzira dzeKONUS mudunhu nekumhiri.
Pamusoro pe, Nzanga vakawanda anokosha mazano kuti kungofamba Tours uye zuva nzendo kwavo KONUS vaeni. Kana waronga refu mutsigiri kungava kubatsira kuwana SchwarzwaldCard uyewo. kadhi Ichi mubhizimisi wakanaka kana ukashandisa discounts chokuita kadhi kuzviita.
Akagadzirira kupfeka yako musango majombo uye kunakidzwa nevamwe hunhu musango? Book chitima yako mukati maminitsi uye NO imwe mari pa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#hikes #Hiking #Hikingstartingpoints #trails longtrainjourneys trainjourney chitima mazano
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Dzidzisai Nokurwisana Bus In Europe
European Trip: Sei Vashanyi Tora Zvitima And Not Planes